SARCOIDOSISUK सदस्यता लें
SarcoidosisUK को सदस्य बनने विचार को लागी धन्यवाद। सदस्यताले हामीलाई सोरकोडोसिसमा पराजित गर्न मद्दत गर्न सकारात्मक र स्थायी प्रतिबद्धता देखाउँदछ।
म किन सरकोडोसिसयू सदस्य बननु पर्छ?
SarcoidosisUK sarcoidosis को लागि एक उपचार पाउन प्रतिबद्ध छ। त्यसो गर्दा हामी शर्त र उनीहरूको परिवार र मित्रहरूसँग बाँच्नका लागि समर्थन र जानकारी प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्छौं।
SarcoidosisUK सदस्यहरूले जागरूकता, सूचना, समर्थन र अनुसन्धानमा हाम्रो काम कोषलाई सहयोग पुर्याउन साथै सदस्यों को बैठकहरुमा दान को दौडने को लागी निम्तो दिने निमन्त्रणा दिनेछ।
सदस्यता कति छ?
वार्षिक सदस्यता मात्र £ 32 हो। तपाईं हरी सदस्यताको लागि पनि अप्ट आउट गर्न सक्नुहुनेछ, प्रति वर्ष 20 पाउन्ड खर्च गर्दछ - £ 12 को बचत। ग्रीन सदस्यताको साथ, हामी तपाईंलाई पत्राचार र पोस्टको सट्टा इमेलको माध्यमबाट हाम्रो पत्राचार र न्यूजलेटरहरू पठाउनेछौं।
म कसरी साइन अप गर्दछु र भुक्तानी गर्छु?
साइन अप गर्न र आफ्नो सदस्यता तिर्न को लागी, कृपया निम्न दुई विकल्पबाट छनौट गर्नुहोस्:
विकल्प 1: अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्
यो विकल्पले तपाईंलाई हाम्रो SarcoidosisUK पसलमा पुन: निर्देशित गरेर अनलाइन भुक्तान गर्न दिन्छ। सदस्यता तल उत्पादन प्रदान गरीएको उत्पादनको रूपमा उपलब्ध छ। सामान्यतया तपाईले चाहानुहुँदा कार्टमा थप्नुहोस्। एक अतिरिक्त दान चेक-आउट चरणको समयमा सरकोडोसिसयूको समर्थनमा थप्न सकिन्छ।
विकल्प 2: सदस्यता फारम भर्नुहोस्
कृपया डाउनलोड गर्नुहोस्, प्रिन्ट गर्नुहोस् र तलको बटनमा क्लिक गरेर सरकोडोसिस युवक सदस्यता फाराम फर्काउनुहोस्। त्यसपछि तपाइँ स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ र फारमलाई इमेल गर्नुहोस् वा पोस्टमा हामीलाई फारम पठाउनुहोस्।
हाम्रो इमेल र पोष्ट प्वाइन्टहरू फेला पार्न सकिन्छ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस पृष्ठ।
SarcoidosisUK को समर्थन को लागि धन्यवाद! हाम्रो काम सम्भव छैन।
SarcoidosisUK कोष स्रकोइडोसिसमा विश्वव्यापी अनुसन्धान। हाम्रो लक्ष्य शर्तको लागि उपचार खोज्नु हो।